Homeụgbọ okporo ígwèKENSİÇİ Rail SystemsFunicular
Transportationgbọ njem ọha na Istanbul na Day Day
Transportationgbọ njem ọha na Istanbul na Day Day. 29 October Republic Day's 96. IMM kwadebere iji mee mmemme afọ ahụ dị ebube, ndị njem na njem ọha a na ezumike mba a kpebiri inye ndị mmadụ n'efu. Mgbakọ nke obodo Metropolitan (IMM), na ntinye aka Onye isi ala Ekrem Imamoglu [More ...]
Usoro ụgbọ okporo ígwè nke Istanbul dị na Tebụl!
Obodo Obodo ukwu nke anakpo Istanbul mere nzukọ omumu ihe eji abanye ya nke sitere na ndi akwukwo ghari rue ndi nnochite anya mpaghara. Ihe omumu ihe omumu a lebara anya oru aka emere rue ta na usoro uzo ugbo ala na Istanbul na uzo ekwesiri iburu ya. 2019 Rail Systems Workshop, Istanbul [More ...]
Ọnụ ego ụgbọ njem esetịpụrụ malitere site na ntinye nke İBB President Ekrem İmamoğlu agbasawanye. MMlọ akwụkwọ IMM kpebiri iji ohere nke kaadị anụnụ anụnụ na-agbada maka ụmụ akwụkwọ na-enweghị ike idozi na ngalaba na nyocha nke mahadum na ndị nkuzi na-arụ ọrụ n'okpuru nkwekọrịta na Ministry of Education. Obodo Obodo Istanbul (IMM) [More ...]
Enedlọ akwụkwọ mepere na Istanbul, enweghị ọgba aghara okporo ụzọ
Na Istanbul, ihe ruru ụmụ akwụkwọ nde 3 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ndị nkuzi 200 mere mmalite nke klaasị taa. N’obodo ebe ndị ọhaneze na-ebugharị ụgbọ njem anaghị akwụ ụgwọ, a na-ebugharị ụgbọala ndị ọrụ iji buru ndị nne na nna. Citizensmụ amaala, site na ịge ntị na oku nke IMM President Ekrem İmamoğlu'nun ụgbọ njem ọha [More ...]
9 Septemba Mọnde Ọha Ọha ga-abụ n'efu na Istanbul
9, nke na-emepe ụlọ akwụkwọ, ga-enye ndị njem njem ọha na n'efu na Istanbul na Septemba Mọnde n'etiti oge 06: 00 - 14: 00 awa. 2019-2020 n’afọ akwụkwọ 9 Septemba 2019 bidoro na Mọnde. 16 dị nso na 4 nde na Istanbul ebe ọtụtụ nde mmadụ bi [More ...]
Onye isi obodo nke obodo Istanbul (IMM) 2019-2020 Onye isi Ekrem İmamoğlu na-akọwa usoro ndị e mere maka afọ agụmakwụkwọ, ụgbọ njem ọha ga-enye ndị ọrụ n'efu na ụgbọ ala ndị ọrụ ga-eburu ndị nne na nna chọrọ ụbọchị mbụ, ka o kwuru. Na-agba ụmụ amaala ume ka ha jiri ụgbọ njem ọha [More ...]
Njikere Okporo Istanbulzọ Istanbul Maka Afọ Nkụzi Ọhụrụ
9, ebe afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ ga-amalite na Istanbul, ka ewerere iji gbochie nsogbu okporo ụzọ na Mọnde. IMM, Nchebe na Gendarmerie ga-arụ ọrụ ọnụ iji hụ na ọpụpụ okporo ụzọ. 06: 00-14: transportationgbọ njem ọha n'etiti awa 00 ga-akwụ ụgwọ n'efu. ụgbọ ala, [More ...]
Transportgbọ njem ọha na Istanbul 30 n'efu na August
Ememe emume mmeri nke 30 nke August, ụgbọ njem ọha na Istanbul ga-ebu ndị njem akwụghị ụgwọ. Dabere na Obodo Obodo Istanbul (IMM), mmeri dị ukwuu nke 97. A ga-eme ihe n’ọtụtụ ebe n’obodo iji jiri ịnụ ọkụ n’obi mee afọ Afọ Ọhụrụ. A na-akpọ mmadụ niile òkù [More ...]
Ndị bi na Istanbul chọrọ IETT na Metro ka ha rụọ ọrụ 24
Ezughi oke nke ahiri ahiri nke IETT kesara na-ekwu na 24 ga-arụ ọrụ ruo ọtụtụ awa yana eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ ahịrị ọdụ ụgbọ elu gbakọtara. Ọ bụ ezie na Megakent Istanbul bụ obodo dị ndụ n'abalị, enwere obere ụgbọ njem ọha na abalị n'abalị. [More ...]
Mkpebi nke Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul mere mkpebi nke Onye Isi oche Ekrem İmamoğlu ga-enye ndị njem njem ọhaneze na Istanbul na Victbọchị Mmeri na thebọchị Mmeri na August 30. IETT ga-ahazi ụgbọ elu maka ụmụ amaala iji ruo ebe a na-achụ igwe mmadụ IMM. Ukwuu Istanbul [More ...]
Mgbe a na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè 221,7 kilogram na Istanbul, ogologo nke usoro okporo ígwè dị n'obodo ahụ ga-eru kilomita 233,05 site na akụkụ kilogram 454,75 dị ugbu a. Iji belata njupụta nke Istanbul, enyere usoro ụgbọ okporo ígwè dị mkpa. 233 n’obodo dịka taa [More ...]
Ọ bụ ezie na mkparịta ụka ọnwụ AKP nke ọtụtụ ndị mepere emepe ka na-aga n'ihu, gọọmentị na-achị achị emeela atụmatụ dị iche iche banyere obodo. Site na iwu ọhụrụ, ọkachasị n'obodo ndị mepere emepe enweghị ike ịme azụmahịa azụmahịa. Dika ozi ndi Okachasi kpoputara. [More ...]
Nkọwa gbasara onye nkwarụ na onye na-enweghị nsogbu Istanbul Card
N'ihi usoro nkwekọrịta nke e tinyere n'etiti Ministry of Health na Obodo Istanbul Metropolitan, "Onye Nkwarụ" na "Ndị Nkwarụ Na-akwado" Istanbulcards ga-edebanye aha na Ngalaba Ahụ Ike na usoro usoro nlezianya. N'okpuru usoro nkwekọrịta nke a na - ede n'etiti Ministry of Health na Istanbul Metropolitan Municipality, [More ...]
15 Ụgbọ njem ndị mmadụ ga-enwe ohere na July
15 3 nke nnwale aka na July. N'ihi n'afọ 2015, ọrụ ụgbọ njem ọha na eze na Başkentray na Marmaray ga-akwụ ụgwọ n'efu. Na July 15 2016 nke kuu mgbalị rụrụ na President nyere iwu na-ebipụta na Official Gazette site na mbinye aka nke President of Turkey Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Istanbul bụ nọmba otu n'ime ụwa
A na-arụ ọrụ na 17 dị iche iche usoro ígwè okporo ígwè gụnyere metro, tram na funicular niile Istanbul. N'ime mpaghara ndị a nke ogologo 221,7 kilomita, 13 rụrụ site na Istanbul Metropolitan Municipality na 4 site na Ministry of Transport and Infrastructure. [More ...]
6 Belata Mmetụta okporo ụzọ na Istanbul
N'agbanyeghi mmụba nke ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala kwa afọ na Istanbul, ndị nchọpụta onwe ha nke mba ụwa kwadoro na ntinye ego nke Istanbul Metropolitan Municipality na njem na ihe ngwọta dị ala belata njupụta okporo ụzọ. Otu n'ime ndị na-enye data na okporo ụzọ kasị ukwuu n'ụwa [More ...]
Nweta njem izu ụka na Istanbul! IETT agbakwunyere oge agbakwunyere
Dịka mkpebisi a kwadoro na atụmatụ nke AK Party Group na Istanbul Metropolitan Municipality Assembly, YKS ga-eme na ngwụsị izu na njem ọha na eze ga-n'efu na ndị nyocha. IETT 180 site n'itinye ọganihu ọzọ maka ụbọchị abụọ [More ...]
Ụgbọ njem ọha na eze maka ụmụ akwụkwọ iji tinye LGS na Istanbul Free!
Ndị njem ụgbọ okporo ígwè nile nke dị na obodo Istanbul metropolitan obodo ga-enye ụmụ akwụkwọ ndị a ga-abanye Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Ụlọ Akwụkwọ High School (LGS) dị ka mkpebi nke ndị òtù nke Mgbakọ si kwuo banyere ụlọ ọrụ AK Party na ụlọ ọrụ IBB. Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]